Somali | Women NSW
GABAR WALBAA WAXAY ISTAAHISHAA CARRUURNIMADA IYO FURSADA MUSTAQBIL WANAAGSAN.
Guurka lagu khasbo ilmaha yar.
Australia waxay siisaa fursada fiican dadkeeda dhalinta yar si ay u gaaraan riyooyinkooda. Qof walbaa wuxuu istaahilaa inuu doorto qofka ay guursanayaan. In lagu khasbo guur ilmaha wuxuu baabi’iyaa gabadha mustaqbilkeeda. Waxay xadadaa xalkooda waxbarasho waxayna baabi’isaa sanadaha ugu muhiimsan dhalinyaradooda iyo ilmanimadooda. Waxay kaloo ka soo horjeedaa qaanuunka. U ogolow inay go’aansadaan mustaqbilkooda wanaagsan.
Guurka la isku khasbaa waa marka qof (ama labada qofba) ay isguursadaan iyaga oo aan si xor ah raali uga noqon. Waxaa laga yaabaa in la khayaanay, la cabsigeliyey ama lagu cadaadiyey in qofku guursado.
Sidee qof loogu khasbi karaa in uu guursado?
Dadka waxaa loogu khasbi karaa guurka si ficil ah ama si shucuureed. Siyaallahaas waxaa ku jiri kara rabsho jireed ama mid galmood, cabsigelin, xirid, ka saarid dugsi, u sheegida qof inuu/inay u keenayso qoyska fadeexad haddii aanay guursan.
Waa maxay guurka khasabka ah ee ilmaha yar?
Guurka khasabka ah ee ilmaha aan gaarin da’da guurka, waxaa kaloo loo yaqaan guurka ilmaha lagu khasbay, waa marka qof ka yar da’da 18 sanadood lagu khasbo inuu guursado.
Sida waafaqsan qaanuunka Australia, ilmaha ka yar 18 sandood ma ogolaan karaan in la guursado Carruurta jirta 16 sanadood iyo 17 sanadood waxay guursan karaan keliya haddii ay haystaan ogolaanshaha Maxkamada iyo waalidkood.
Ma jiro qof ka yar 16 sanadood oo sharciyan u guursan kara sinaba.
Yaa isticmaalaa guurka khasabka ah ee dadka ka yar da’da guurka?
Guurka khasabka ee ilmaha aan gaarin da’da guurka kuma eka dhaqan, diin ama qawmiyad gaara.
Guurka khasabka ah ee ilmaha aan gaarin da’da guurka waa dembi Australia gudaheeda.
Guurka khasabka ah ee ilmaha aan gaarin da’da guurka waxay ka soo horjeeda sharciga Australia. Waa sidoo kale guurka khasabka ahi.
Sidoo kale guurka khasabka ah, qof kasta oo door ka qaata qabanqaabada guurka khasabka ah ee ilmaha aan da’diisa gaarin waxaa la xiri karaa ilaa todoba sanadood. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara qoyska, saaxiibo, qabanqaabiyayaasha arooska, kuwa isku nikaaxa dadka, iyo hogaamiyayaasha diimaha. Sharcigu wuxuu khusaynayaa xataa marka guurka ama munaasibadu tahay fal-diimeed, ama aanu ahayn guur sharcigu xirayo.
Sidoo kale waa dambi marka qof la keeno Australia iyada oo ujeedadu tahay guur khasab ah, ama laga kaxeeyo Australia si dibada loogu guursado. Dadka lugta ku leh qabanqaabinta guurka khasabka ah ee dadka aan gaarin da’da guurka waxaa la xiri karaa 25 sanadood.
Muxuu yahay guurka la isku qalqaaliyey?
Guurka khasabka ah iyo kan la isku qalqaaliyey way kala duwan yihiin.
Guurka la isku qalqaaliyey waa marka qof jira 18 sanadood ama ka weyn la baro qof guur doona qof kale (badanaa waxaa sameeya qoyska). Labada qof ayaa dabadeed doorta inay isguursadaan ama aanay is guursan. Labada qof waa in ay isku raacaan guurka isku qalqaalinta.
Guurka la isku qalqaaliyey sharcigu waa ogol yahay Australia gudaheeda.
Haddii aad ka shakido in ilmo lagu khasbay guur, kaalmo raadi.
Badanaa way adag tahay in la ogaado haddii ilmo ama qof yar lagu khasbay in uu ku guursado isaga/iyada oo aan gaarin da’da guurka. Haddii aad ka shakido in ilma lagu khasbayo inuu/ay guursato iyada oo aan gaarin da’da guurka waa in aad kaalmo raadisaa sida ugu dhaqsaha badan.
Waa muhiim inaad qadariso amaanka qofka khatarta ku jira oo guurka lagu khasbayo iyo adiga amaankaaga. Haddii ay jirto khatar degdeg ah ama cabsi rabshadeed wac 000.
Haddii kale NSW gudaheeda wac Khadka Kaalmada Ilaalinta Ilmaha ee 24ka saacadood oo ah 132 111.
Khadka Kaalmada wuxuu bixin karaa talo iyo caawima 24ka saacadood ee maalintii ah ee dadka dhalinta yar iyo carruurta kuwaas oo khatar ugu jira in wax gaaraan. Kuwaas waxaa ka mid ah kuwa khatarta ugu jira guurka khasabka ee qof aan da’da guurka gaarin.
Waxaa laga yaabo inuu jiro qof aad aaminto, sida dhakhtar, macalin ama xubin qoyska ka mid ah kaas oo aad kala hadli karto guurka khasabka ah ee qof aan da’da guurka gaarin.
Haddii aad ku hadasho luqad aan ka ahayn Ingiriiska la xiriir Adeega Afcelinta iyo Tarjumaada qoraalka tel: 131 450 weydiina in lagugu xiro Khadka Caawimada Ilaalinta Ilmaha oo ah 132 111.
Macluumaad intaas ka badan
Jooji dhiigmiiradka (End Exploitation) (Da’daalka Xukuumada Australia) www.ag.gov.au/forcedmarriage Lidka-Adoonsiga Australia (Anti-Slavery Australia), 02 9574 9662 www.antislavery.org.au
Wac 132 111 si aad u hesho macluumaad iyo caawimo.